Shiinaha SPC Dabaqa SM-021 Soosaarka iyo Warshad | Dheeraad ah
Waqtigaan la joogo, dhumucda spc ma ahan 4mm iyo 6mm labo qeexitaan ayaa ka sii caadi badan, maxaa yeelay wadanku ma lahan xoogaa xeerar ku saabsan cabbirka dabaqa sidaa darteed asal ahaan baaxadda dabaqa warshad kasta wali wey ka duwan tahay. Dabaqa SPC waa khafiif, laakiin culeysku wuu sareeyaa oo iska caabbintu wey sarreeysaa. Waqtigan xaadirka ah, heerarka sagxadda sagxadda nooca ugu tayada wanaagsan ama dhoofinta, qalabka cad ee waddaniga ah, qalabka leh gudbinta iftiinka sare. Dusha sare ayaa u adkeysanaya biraha culus iyo formaldehyde. Ta labaadna waa sagxadda SPC, oo si saami ahaan ugu dhexjirta walxaha dib loo warshadeeyay. Qaarkood wali waxay gaarayaan dhinaca hoose ee cad laakiin way jilicsan yihiin. Si fudud loo xoqin. Waxa kale oo jira saxan hoose oo cagaaran oo cagaaran. Tan waxaa badanaa lagu isticmaalaa guriga. Alaabtu uma baahna in la soo bandhigo wax badan, waad u isticmaali kartaa inaad ku dhejiso suuqa iyadoo farqiga u dhexeeyo dhab ahaantii waa laba jibbaaran dhowr doollar oo dhibaatada ka jirta si loo arko dookha iibsashada qof walba.
Gogosha dhagaxu waxay saameyn weyn ku yeelatay nolosha aadamaha tan iyo maalintii uu dhashay. Iyada oo horumarinta cilmiga sayniska iyo teknoolajiyada balaastikada si aad iyo aad ah loogu adeegsado nolol maalmeedka dadka, baaxad weyn ilaa hawo yar oo miiska dadka la isticmaalayo alaabada balaastigga ah, alaabada caaga ah ee warshadaha qalabka dhismaha ayaa si weyn loo isticmaalaa. Caaga Pvc oo ah maaddada ugu weyn ee sagxadda si tartiib tartiib ah ayey ugu roon yihiin macaamiisha, taasi waa - sagxad-caag ah.
Awoodda baaritaanka, sagxadda dhagxaanta waxay leedahay aashito adag iyo caabbinta daxalka alkali, waxay adkeysan kartaa baaritaanka jawiga adag, oo aad ugu habboon isticmaalka isbitaalada, shaybaarada, machadyada cilmi baarista iyo meelaha kale.
Ujeedada nadiifinta dabaqa SPC iyo dayactirka
1. Hagaajinta muuqaalka: ka saar wasakhda lagu soo saaray isticmaalka maalinlaha ah, ka dhig dabaqa SPC si buuxda u muuji muuqaalkiisa aan caadiga ahayn iyo dhalaalka dabiiciga ah.
2. Ka ilaali dabaqa: ka ilaali dabaqa SPC kiimikooyinka shilalka, calaamadaha dhamaadka sigaarka, daabacadaha kabaha, saliida iyo biyaha, yaree heerka xirashada farsamada dusha sare, siiya ciyaar buuxda adkaysiga dabaqa laftiisa, si loo kordhiyo nolosha adeegga dabaqa.
3. Daryeelka ku habboon: iyadoo loo eegayo qaabdhismeedka dusha sare ee isafgarta iyo daaweynta gaarka ah ee dabaqa SPC, waa in fiiro gaar ah loo yeesho nadiifinta iyo dayactirka maalinlaha ah, taas oo ka dhigi karta dabaqa mid sahlan oo daryeel iyo cimri dheereyn adeegiisa ah.
Hore: SPC Dabaqa SM-020
Xiga: SPC Dabaqa SM-025
SPC Dabaqa SM-026